Madda Walaabuu Press: Miidhaan barsiisota Oromoo irra gahaa jiru, egeree Oromoo fi Oromiyaa bal’eessuuf duula geggeeffamaa jiru keessaa qaama tokko!
Posted by MADDA WALAABUU PRESS on 10/11/2015
Onkoloolessa 10, 2015 | Leelloo Sabaa Irraa
Manneetii leenjii barsiisotaa seenuuf, dandeettii osoo hin taane, miseensa OPDO ta’uu tu ulaagaa jalqabaa ti. Barsiisummadhaan ummata isaanii tajaajiluuf kanneen fedha fi dandeettii qaban, miseensa OPDO ta’uu waan didaniif carraa dhorkatamanii fedhiin isaanii keessatti ajjeeffama. Barsiisummaan ummata isaanii tajaajiluuf kanneen miseensa OPODO ta’uuf dirqaman illee, miidhaa ummata Oromoo irra gahu ilaalanii callisuu waan hin dandeenyeefi hiriira ummata Oromoo seenanii mootummaa irratti yeroo mormii dhageesisan, maatii isaanii irraa fageessanii baadiyyaatti ramaduun adabu. Tarkaanfiin kun, miindaa xiqqaa isaan argatan bakka lamatti akka qoodamu godhee beelaa, daara fi dhukkubaaf kan barsiisotaa fi maatii isaanii saaxilu qofa osoo hin taane, diigamsa maatii barsiisotaaf illee sababa guddaa dha. Barsiisoti hiriira ummata bal’aa Oromoo seenanii mootummaa Ixoophiyaa irratti mormii dhageessisan hedduun, beenyaa tokko malee hojii irraa hari’amu, ajjeefamu, gariin hidhamanii mana hidhaa keessatti oggaa dararaman, hedduun isaanii ammo biyyaa abbaa isaanii irraa akka baqataniif dirqamu. Guddinaa fi egeree ummata tokkoof murteessoo ta’anii osoo jiranii, miindaan barsiisota Oromoof kaffalamu kan harka irraa gara afaanii qofa. Sababa kanaatiif, barsiisoti Oromoo jia irraa ji’atti liqiidhaan jiraatu. Ji’i dhumee oggaa miindaa fudhatan, liqii baasanii kan kiishatti hafuuf hedduu xiqqaa waan ta’uuf, walakkaan ji’aa osoo hin gahin liqaan nyaatanii, liqaan daara bahaa liqaan mana kiraa keessa jiraatu. Sababa kanaaf, barsiisoti Oromoo jireenya guddoo nama gaddisiisu keessa jiraatu. Duula Oromoo :ajjeesuu, hidhuu, saamuu, qeyee irraa buqqisuun lafa isaa saamuu fi kkf irraa kanneen hirmaatan: lubbuu, dhiiga, lafee fi inimmaan Oromootiin garaa isaanii guddifatanii fi lafa saaman irratti mana ijjaarratanii jireenya Tigroota irraa hafte oggaa jiraatan, barsiisoti Oromoo guddinaa fi egeree Oromoo fi Oromiyaaf murteessoo ta’an kun garuu jireenyaa hiyyummaa keessatti darbamanii itti qoosamaa jiraatu. Gochaan yakkaa bifa kanaan barsiisota Oromoo irratti Ixoophiyaan raawwataa jiru, hamilee barsiisota Oromoo cabsee abdii kutannaa hamaa keessa akka isaan jiraatan godhee jira. Biyya Tigraayi keessatti, barsiisoti Tigee,jireenya gaarii fi gammachuu jiraachifamanii guddinaa fi egeree tigrootaaf jabinaan akka hojjetaniif mootummaan tigree kan haala aanjesseefi jiru oggaa ta’u, kan barsiisota Oromoo garuu faallaa kanaa ti. Barsiisoti Oromoo, rakkoo diinagdee fi hawaasummaa qaban wal-ijaaruun keessaa bahuuf akka hin tattaafanneefis, walaba ta’anii of ijaaruuf mirgi ijaaramuu Impaayera Ixoophiyaa keessatti hin kabajamu.